Malunga Nathi | Nenwell efrijini
I-NENWELL yasekwa ngo-2007. Ukutyhubela iminyaka yokusebenza nzima kunye nemigudu, ngoku siye saphuhlisa njengomvelisi othembekileyo, othembekileyo kunye nomthengisi weemveliso zefriji zorhwebo ezifana nomboniso othe tye, umboniso wekhekhe, umboniso we-ice cream, ifriji yesifuba, ifriji encinci yefriji njl. Abathengi banokukhetha kuluhlu lwemveliso yethu, okanye singenza ngokwendlela yoyilo kunye neemfuno zabathengi. Sineqela leenjineli zobugcisa kunye nabasebenzi abaneminyaka eyi-10 yamava ekuyileni nasekuveliseni. Sikwanayo nenkqubo engqongqo yolawulo lomgangatho ukuqinisekisa ukuba yonke intwana yeemveliso zethu inokuhlangabezana neemfuno zomgangatho kubathengi. Sikwabonelela ngenkonzo ebalaseleyo emva kokuthengisa ukwanelisa abathengi bethu ukuba banombuzo okanye ingxaki. Sigxile kuvavanyo lomgangatho, imiba yolungiselelo kunye nokubonelela ngemithombo emitsha yababoneleli/befektri eTshayina ukwenzela wena kunye nenkampani yakho. Ngelizwi nje, sinokuyibamba yonke inkonzo yokuthumela ngaphandle kubathengi bethu. Inkampani yethu ijolise ekuboneleleni iqabane lethu lentsebenziswano ngeyona nkonzo iphuculweyo equka imveliso, umgangatho, ixabiso kunye nenkonzo. Ngokusekwe "Kubantu, ukubonelela ngenkonzo exabisekileyo", ingcamango yokusebenza esisiseko kunye nobudlelwane obuxhasayo, obuxhomekeke kunye nozinzo lwexesha elide lwentsebenziswano, kunye nembono yenkonzo yokuvuselela rhoqo, siya kubonelela ngenkonzo ebaluleke ngakumbi kwimarike nakuluntu. Ngemigudu eqhubekayo kunye nokuziqhelanisa nabo bonke abasebenzi, ngoku sineseti yeendlela zokusebenza kunye nenkqubo yomsebenzi ukubonelela ngenkonzo engcono kumaqabane ethu entsebenziswano kunye nabathengi.
Gqibezela umgca wemveliso kunye nomgangatho othembekileyo
Amaziko okuvelisa akumgangatho ophezulu
Iqela leQC lobuchwephesha
Inkxaso yobugcisa kunye nonikezelo lweendawo ezisecaleni
Ingqalelo kwiinkcukacha kunye nenkonzo ekhawulezileyo
iimveliso zefriji izincedisi
·Ukuthatha inxaxheba kwiindidi ezahlukeneyo zemiboniso yamazwe ngamazwe minyaka le. Oku kusenza ukuba sibe ngabachwephesha ngakumbi kwaye sibe novakalelo kwiintsingiselo zemarike. ·Nikeza kwaye ucebise abathengi ngolwazi olongezelelekileyo lwentengiso kunye nophuhliso lweemveliso. ·Ukwazi ukuphuhlisa iimveliso ezintsha kunye nabathengi okanye ukuphuhlisa ngokuzimeleyo. ·Uqhelene neefektri zamazwe angaphandle kunye nezasekhaya kunye nekhonkco lokubonelela.. · Ukusebenzisana nabavelisi abahlukeneyo iminyaka engaphezu kwama-20. ·Ukukwazi ukwenza ingxelo yeendleko ezichanekileyo. Hlala unolwazi ngotshintsho kwimarike yezinto. Lawula elona xesha lilungileyo lokuthenga Uncedo abathengi ukugcina iindleko.
Ngemigudu eqhubekayo kunye nokuziqhelanisa nabo bonke abasebenzi, ngoku sineseti yeendlela zokusebenza ezingaguqukiyo kunye nenkqubo yokusebenza ukubonelela ngenkonzo engcono kumaqabane ethu entsebenziswano kunye nabathengi.
Yiba nombono wamazwe ngamazwe ngobubanzi kunye novakalelo lwemarike, unokuphuhlisa iimveliso ezintsha okanye ezilungiselelwe abathengi. Ukuba phambili kwimarike, ukuphumelela isabelo semarike esingaphezulu kunye nenzuzo kunye nabathengi kunye. Ihlala ibonelela ngeengcebiso ezisebenzayo zophuhliso lwentengiso kubathengi abahlukeneyo, abathengi abalinywayo amava emveliso yefriji, ukunceda abathengi ngokukhawuleza ukuba bathathe isabelo semarike!
iSebe lenkonzo yabaThengi
Amava omsebenzi agqwesileyo kunye nomsebenzi weqela lobuchwephesha ukubonelela ngesona sisombululo silungileyo kubathengi.Inokubonelela ngeyona ndlela ilungileyo yothutho lolwandle kunye nomoya, isicwangciso sokuhanjiswa kunye nengcebiso yeendleko zokuthenga. Impendulo ekhawulezayo:Phendula ngokukhawuleza kuyo yonke imibuzo ngexesha lokwenziwa kweodolo. Ukuphendula ngokukhawuleza kunye nengcali kwimiba esemgangathweni!
I-Nenwell ineqela lolawulo lobulunga lobuchwephesha. Kulungile khangela yonke imveliso oda. Siza kwenza ingxelo yokuhlola kubathengi emva kwemveliso. Ukuphendula ngokukhawuleza kunye nengcali kwimiba esemgangathweni! Ingaba ngummeli wabathengi baphesheya.Ukubambisana kunye nefektri ukuphuhlisa imveliso kunye nokuphucula umgangatho.
isebe lorhwebo empuma afrika
Kule minyaka ilishumi idlulileyo uphuhliso olukhawulezileyo, iFoshan Nenwell Trading Co.,Ltd. uye waseka ngempumelelo imodeli yeshishini eliqolileyo, kwaye ufumane izakhono zokubonelela ngeenkonzo zexesha elide kubaxumi bethu. Ukufuna iindawo ezintsha zokukhula ukukhulisa ngakumbi isabelo sentengiso yentengiso, inkampani yethu ngoku iphonononga iimarike zangaphandle, kutsha nje iphumelele amasebe eKenya, eMpuma Afrika, ijolise ekuboneleleni ngezona mveliso zibalaseleyo ngamaxabiso akhuphisanayo kubathengi basekhaya. .